Ukubaluleka kokwenza igama elifanelekileyo lophawu okanye imveliso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubaluleka kokwenza igama elifanelekileyo lophawu okanye imveliso
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Izibonelelo, Ezahlukeneyo
Ukubaluleka kokudala elungileyo amagama enye uphawu okanye imveliso es siseko kubo bobabini abenzi bokuyila kunye nabasomashishini. Inkqubo ye- igama lophawu okanye imveliso inokuba yinxalenye ebalulekileyo yakho uloyiso okanye ukusilela njengoko kuphela kwendlela yabasebenzisi yokujongana nayo kunye nophawu kubasebenzisi ngale ndlela yonxibelelwano.
Yazi yena Ukubaluleka kwegama lophawu kwaye uyazi indlela yokwenza into elungileyo Inkqubo ye amagama Linyathelo elibalulekileyo xa uchaza igama lophawu, imveliso okanye uhlobo oluthile lweprojekthi. Ulwakhiwo Ulwazi, ukufuna izikhombisi kunye nokwenza isindululo ngokusekwe kuthotho lwezikhokelo ezimiselweyo kunokuba sisitshixo ku mpu melelo yomsebenzi wethu.
Xa kufuneka senze umsebenzi we amagama kuyacetyiswa kakhulu ukuba yanele ulwazi kunye nezalathiso zazo zonke iintlobo zeempawu okanye ezinye izingqinisiso ezinokusebenza njenge ukhuthazo loyilo. Isalathiso esihle kukuba UFernando Beltran ukuba yingcali enkulu kwinkqubo ye amagama iimveliso kunye neemveliso. Sinokukhangela ulwazi kwi-intanethi, iincwadi, okanye nawuphina umthombo.
Okokuqala siya kuthi Hlalutya uphawu lwethu: Chaza amaxabiso abo, iintshukumo, into abayenzayo, bayenza phi, iinjongo, bajolise kubo ... njl.
Masiqale senze i Ukonakala kwezinto eziphambili yophawu lwethu okanye imveliso ngohlobo lokuba sikwazi ukubona ngokucacileyo amanqaku aphambili (intsingiselo) yohlobo. Kuyacetyiswa kuyo yonke le nkqubo amagama Sebenzisa izixhobo zemizobo ukwenza umxholo, singasebenzisa ibhodi emnyama, imibala ... njl.
Isishwankathelo samanyathelo amagama inokuba zezi zilandelayo:
Dibana: yazi i-brand kunye namaxabiso ayo.
search: ulwazi, izingqinisiso zokwazi esele ikhona kweso sihloko.
Ukukhumbula (vula ingqondo): hlukana neengcinga ezinokubakho zegama lethu, ukuseka ubudlelwane ... njl.
Emva kokwazi ukuba uphawu lwethu lunjani, kufuneka siqale khangela ulwazi inxulumene nalawo maxabiso besikhe sawachaza ngaphambili. Singakhangela ulwazi jikelele okanye ufumane ulwazi malunga nemvelaphi yamagama Iimpawu ezikhoyo.
Isinyathelo esilandelayo kukuba Vula ingqondo kwaye uqale ukwakha ubudlelwane kunye iilebula Yophawu lwethu. Umbono kukukhangela: ubudlelwane, imidlalo yamagama, nazo zonke iintlobo zeembono ezisincedayo ukuba siyifumane Igama elifanelekileyo lophawu lwethu okanye imveliso.
Ngoku siza kubona umzekelo omncinci ukwenza ukuba kwenzeke amagama evela kwinkampani ebubuxoki.
Este ikhomishini yobuxoki ifuna ukwenza igama le APP yezothutho zikawonkewonke kwezoqoqosho, ikakhulu bafuna ukugxila kwiibhasi kunye nokwabelana ngemoto (ireferensi blablacar). Abo bafikelela kubaphulaphuli ngokubanzi ngenxa yesi sizathu bangathanda ukuba amagama abo abe ngesiNgesi.
Saqala uku khangela izikhombisi kunye namagama aphambili ezimele isicelo:
kunokwenzeka amagama angundoqo: ezothutho, imoto, ibhasi, ezoqoqosho.
Igama elisekwe kwi ukumelwa kweshishini lesicelo apho abasebenzisi bayo baya kuhamba ikakhulu: imoto kunye nebhasi. Ngala magama mabini iguqulelwe kwisiNgesi Sifumana igama UKUFUNA, igama kulula ukukhumbula kwaye inxulumene nesenzo sesicelo.
Ngendlela ye- Ukuphefumlelwa Masibone i amagama yohlobo lophawu lokuzonwabisa ngefowuni.
Amen inegama elisekwe kwi ubudlelwane begama "elithandekayo" kunye nexabiso layo: intsha, eyahlukileyo, enye indlela, inkampani eqhankqalazayo, kude nesithukuthezi kunye nesiqhelo. Ngaba ezi zixabiso kunye nale indlela yokuthengisa kwihlabathi elenza ukuba igama labo lisebenze xa besenza olu lwalamano kuba bazithengisa ngale ndlela hayi enye. Ukuba sibeka eli gama linye kwenye inkampani yeefowuni eziphathwayo asinakuba neziphumo ezifanayo kuba ezinye iinkampani azithengisi ngaloo ndlela. Nge-ente siyakuqonda ukubaluleka kwe- tCacisa malunga namaxabiso ebhrendi xa usenza igama elichazayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ukubaluleka kokwenza igama elifanelekileyo lophawu okanye imveliso
Amanyathelo okuba nguMyili weWebhu eyiNgcali
Imbali ye-Apple logo